[Review] Bổn Vương Ở Đây – Cửu Lộ Phi Hương | Anybook.vn - Anybook
[Review] Bổn Vương Ở Đây – Cửu Lộ Phi Hương | Anybook.vn
09/06/2022 Anybook.vn 0 Comments
Niantomboka tamin’ny zava-nitranga hafahafa ny tantara. Tamin’izany fotoana izany, izy dia mpitaingin-tsoavaly tsy mety maty, ny fiainana arivo taona dia mankaleo loatra ny fiainana ankehitriny, noho izany dia nisotro lasopy Manh Ba izy ary niova ho faty malemy ary fohy ny androm-piainany. Raha ny momba azy, Bich Thuong Mpanjaka mahery ao amin’ny fanjakan’ny demony, noho ny fanoherany ny fanambadiana ara-politika, dia navelany naratra mafy izy, nivadika ho “akoho tsy misy volo” teo amin’ny Tontolo Olombelona ary naveriny ho notezainy. Rehefa nandeha ny andro, dia nisy zava-nitranga maro nokarakaraina tamim-pitandremana, tsapan’i Shen Ly fa tena mahery tokoa ity lehilahy antsoina hoe Hanh Van ity, sady tsapany ihany koa fa ny fony tsy voahozongozona nandritra ny arivo taona no nanao azy.
Tsy ny fandosirana anefa no lalana tokony haleha. Tsy maintsy niverina tany amin’ny fanjakan’ny demonia i Shen Ly mba hanatanteraka ny adidiny. Ary izy, Hanh Van, rehefa avy voapoizina sy maty, dia niverina tany amin’ny zohy ambony iray – Hanh Chi. Fa tena faly ve ny maha-mpihazona ny fanjakana telo, miaro ny zavamananaina manana hery tsy manam-petra toa anao? Manana andraikitra izy, tsy maintsy manafina ny fitiavana te hirehitra foana. Tsy tokony ho voahetsika izy, na dia raiki-pitia aza, fa mbola mikarakara azy mangina, manafina ny faniriany mandritra ny andro maromaro. Mbola mitahiry ny fahatsiarovana miaraka aminy ao ambanin’ny trano kely izy, miaraka amin’ny voaloboka sy ny fitoeran-trondro, mitahiry ny feo antsoiny hoe “Shen Ly, andao isika hihinana”. Saingy satria izy no Mpanjakan’i Bich Cang, noho ny andraikiny miaro ny fanjakan’ny demonia, dia tsy maintsy nafoiny ihany koa io fihetseham-po mahery vaika io. Mifankatia fa tsy maintsy misaraka, very mangirifiry.
Nandray fanapahan-kevitra feno fitiavan-tena anefa izy indray mandeha. Rehefa nandre ny vaovao momba ny fahafatesany izy dia very saina ary nijaly, tsy niraharaha ny zava-drehetra fa nanamaivana ny Dong Hai manontolo nandritra ny 10 andro sy 10 alina mba hahitana ny vatany. Hoy izy: “Amin’ny ho avy, na hilatsaka ny Lanitra ivelan’ny Lanitra na handrava ahy ny Fanjakana Telo, dia hiaro azy tokoa aho.” Takany lalina ny fahatsapana ho very olon-tiany, eny, ny tena atahorany amin’izao fotoana izao dia ny fahaverezany, ny tsy fananana azy eo anilany. Hanh Chi, nanapa-kevitra ny hijanona teo anilany izy mba hiaro azy, na inona na inona hitranga amin’ny ho avy, dia mbola tsy mamela azy izy. Shen Ly, noho ny fitiavany tsy misy fetra, dia nanapa-kevitra ny hiaraka aminy amin’ny fijaliana miaraka, ny fiainana sy ny fahafatesana dia tsy azo sarahina.
Bon Vuong eto dia asa iray napetrak’i Cuu amin’ny fony manontolo. Tsy very maina ny fanantenan’ny olona maro, ity asa ity dia tena tsara, mendrika hovakiana. Ny tantara dia manana Hanh Chi hafahafa, mahatsikaiky nefa lalina, feno fitiavana sy fiahiana ny vadiny. Misy Tham Ly mafy ny ivelany, malefaka ny ao anatiny, matanjaka ny ivelany, malemy ny ao anatiny, ary io fahalemena io ihany no hitany. Ho fanampin’ny sora-baventy mahafinaritra nataon’i Rtoa Cuu, ireo zava-nitranga sarotra sy ny fara tampony tena mamelombelona amin’ny tantara dia manampy zava-manitra hamoronana sakafo mahasarika, ka manasarotra ny mpamaky hanakatona ilay boky.
“Raha maty aho sy izao tontolo izao. Iza no novonjeny?
“Izaho mamonjy izao tontolo izao, fa hiara-maty aminao aho.”
Ny tenin’ny Emperora. Nihevitra fa vazivazy izany. An’izao tontolo izao ny vatana – Tsy maintsy manohana azy ianao ho an’izao tontolo izao, tsy afaka miaina amin’ny saina ianao. Amin’ny minitra farany amin’ny fiainany ihany angamba dia afaka miala amin’ny andraikitra rehetra izy ary manome ny fitiavany rehetra!
Ny tongolo dia andriamanitra toy izany. Ny maha-olona miaritra ny teritery rehetra eto amin’izao tontolo izao, an’ny Fanjakana Telo! Andriamanitra? Te ho lehilahy fotsiny izy!
Arivo taona nitokana tany amin’ny lanitra ivelany, nijery ireo namana tsy mety maty nanjavona, namela azy teo mba hamatotra amin’ireo zavamananaina ao amin’ny Fanjakana Telo! Tsy maintsy nanaiky izy vao nahita izay tiany hiala tsikelikely! Ny fanahy dia mijaly noho ny teritery maro, mijaly amin’ny fatiantoka maro, ary tsikelikely lasa tsy miraharaha sy masiaka.
Namatotra zavatra be loatra izy. Na ny fahafatesana aza tsy afaka manome ahy. Na ny saina kely aza tsy afaka manana…
Farany, nihaona tamin’i Shen Ly, vehivavy mendri-kaja izy. Tsy maintsy miaro firenena ny tovovavy iray. Izy sy ny hazakazaka demonia, dia sabatra harena. Amin’ny maha sabatra maranitra an’ny hazakazaka demony, angamba izany no tsy namelany ny tenany ho malemy. Natanjaka loatra ho an’ny vehivavy izy.
Nihaona izy sy izy. Mitsoka ny fitiavana. Saingy tsy afaka manana saina ny Hanh Chi, tsy maintsy miaro ny hazakazaka demonia ny Shen Ly. Ho afaka hiaraka ho mpivady ara-dalàna ve izy roa?
Tony i Hanh Chi, fa noho ny fitiavany olona iray, dia nanamaivana an’arivony kilaometatra an’i Dong Hai izy, na dia manohitra ny lanitra aza izy, dia te hamerina ny lavenona. Izany no izy! Fitia mangina fa vaky fanaintainana.
Angamba amin’ny farany, ny fiarahan’i Hanh Chi sy Tham Ly no farany mendrika azy roa. Fiafarana mahafinaritra ho an’i Tham Ly sy Hanh Chi izany.
Io fiafarana io dia mijery amin’ny lafiny hafa ary mahatonga ny olona hahatsapa fanaintainana. Mba hanana izany fahasambarana izany. Nanao sorona ho azy i Mo Phuong. Nanao sorona ho azy koa i Phung Lai.
Mo Phuong dia mpamitaka amin’ny hazakazaka demony, namadika na dia ny rahalahy akaiky indrindra aza. Saingy amin’ny farany, tsy namadika an’i Shen Li mihitsy izy. Tsy nivadika hatramin’ny farany ny fitiavany azy. Nanimba ny zava-dehibe ho azy izy, nanimba ny drafitr’i Fu Sheng noho ny aminy. Tamin’ny farany, dia maty ho azy izy! Toy ny onjan-dranomasina ny fitiavany azy. Lalina, mazava nefa mafonja. Ahoana no nampijalijalina azy hatramin’ny nanelanelana azy sy ny fankahalana? Tahaka an’i Hanh Chi izy, mifamatotra amin’ny andraikitra tsy ampoizina. Izy anefa no nifidy azy, satria tsy maintsy nanaisotra izany andraikitra izany izy. Na dia nandà aza izy, dia mbola nanao sorona mangina ho azy. Mo Phuong izany. Lehilahy be fitiavana, mafana, madio…
Angamba mandra-pahafatiny dia mbola tsy fantatr’i Mo Phuong, noho izy dia lasa adala i Fu Rong. Taorian’ny nahafatesan’i Mo Phuong, toa nangatsiaka loatra ny fandrian’i Fu Rong. Tsy noho ny tafik’i Fu Rong mijangajanga intsony… Toy ny nihalehibe rehefa avy nijaly…
Raha miresaka momba an’i Phung Lai, dia tena mampalahelo ny olona izany. Nijanona tsy vita ny fitiavana teo amin’i Phung Lai sy Luu Vu, latsaka tao anaty torimaso arivo taona izy. Rehefa nifoha izy, dia lasa ilay zavatra sarobidy indrindra – Luu Vu. Ny sento rehefa raiki-pitia dia toy ny arivo taona nivory nostalgia, ary tsy azo lazaina izany. Fohy loatra ny tena fiainany. Tena misy ve ny fahasambarany, toy ny rivotra mitsoka avy eo. Ny hany sisa tavela dia ny zanany vavy mbola tsy hitany mihitsy – Shen Ly. Tamin’ny farany dia nisafidy ny hampiasa ny fiainany izy mba hamonjena an’i Shen Li. Io safidy io, na noho ny fanarahana ny dian’i Liu Yu na noho ny fitiavany ny zanany vavy, dia mbola lozabe loatra taminy izany safidy izany. Miaraka amin’i Tham Ly…
Tena tia an’i Hanh Chi ihany koa i U Lan, tahaka ny fitiavan’i Mo Phuong an’i Shen Ly lalina sy miondrika. Nanaiky hanakana ny fihetseham-pony izy mba hanampiana an’i Shen Ly sy Hanh Chi. Ekeo ny hitahy ny olon-tianao miaraka amin’ny tovovavy hafa. Mangarahara ny fitiavany, indraindray tsy toy ny ando eo an-tampon-dravina, malefaka sady mazava…
Nifarana tamin’ny seho falifaly an’i Hanh Chi sy Tham Ly ny tantara. Ny manodidina an’io fahasambarana io ihany no mbola eo, fa ny fahafoizan-tena sy ny fatiantoka dia mbola manjavozavo manodidina…
Mbola somary mampalahelo ihany…
– Le Hang
Ny fahafantarana ny tantara avy amin’ny toko voalohany dia nadika, voasarika hitsambikina, nefa mbola tapa-kevitra ny hiandry mandra-pahavitan’izany vao hitsambikina. Fa tampoka teo dia nisy copyright ilay tantara ka nijanona fa lasa adala aho namaky azy. Marina izany, fikarohana mivadika.
Ny firafitry ny tantara dia mbola tena mazava sy manintona toy ny ankamaroan’ny tantaran’i Rtoa Chin (Cuu Lo Phi Huong), tiako indrindra ny tantaran’ny nofinofin’i Chi, izay manambatra tsara ny hafaliana amin’ny alahelo sy ny fihomehezana. rehefa mitomany, fa indrindra indrindra, “The King eto” dia azo lazaina ho tantara miavaka indrindra amin’ireo tantara nadika avy amin’ny Rahavavy Chin izay novakiko hatramin’izay. Ny mpandika teny koa anefa dia tena be pitsiny tamin’ny fandikana azy, raha ny tokony ho izy, ny fandikan-teny dia mirindra sy mahasarika ny maso, ary koa mampita ny fihetseham-pon’ireo olona.
Ny toetra koa dia tsy manana fandrosoana be dia be, ny maha-vehivavy Vuong Gia Ma Realm sy ny lehilahy God Monarch an’i Thien Ngoai Thien. (Tsy fantatro hoe inona izany, tsy maintsy hoe Lanitra any an-danitra izany, tamin’izay fotoana izay dia nihevitra aho fa Andriamanitra Emperora no ambony indrindra, ankehitriny misy andriamanitra any an-danitra any ivelan’ny Lanitra ambonin’ny lanitra aza, dia mampisafotofoto.) Hafahafa. ity tantara ity dia mipetraka ny toetran’ny lehilahy, ny toetrany fa ny maha izy azy.
Ny toetran’i Tham Ly dia karazana mahery fo, mitondra antsy hanapaka ny fahavalo, be herim-po sy sahisahy, tsy vehivavy velively. Tiako indrindra ity karazana toetran’ny vehivavy matanjaka ity, miasa am-pahatsorana sy tapa-kevitra, tsy misy andalana lava toy ny karazana vehivavy malemy hafa. Misy lafy ratsiny koa anefa ny tombotsoa, ​​ohatra, rehefa te hihaino azy kely ianao dia mipetraha ary avelao hiasa izy, avelao izy hiaro azy, dia mandositra fotsiny izy dia toy ny mitondra loza ho an’ny vatany. ny fitiavany. Isaky ny toy izany aho dia te hikapoka latabatra sy hanozona azy, fa io toetra io no mahatonga azy ho lavo aminy, raha tsara izy dia lavo. Raha fintinina dia ianao ihany no mijery ny lasa.
Alohan’ny hiresaka momba ny mpilalao sarimihetsika, dia tokony hiresaka momba ny mpanohana, Mo Phuong. Amim-pahatsorana, tsy dia talanjona loatra aho amin’ity toetra lahy sy vavy ity, Mac Phuong, tsy maintsy lazaina fa ny fahazavan’ny toetrany dia efa voasaron’ny aura-n’ny loham-pianakaviana lahy, ny mahavonjy ny loham-pianakaviana vavy ihany no azony, mitondra ny vavy. firaka.natolotra ny lehiben’ny lehilahy ihany. Mandratra ihany koa ny mieritreritra an’izany, tsy tia tena, mitondra lolom-po tsy azy, voatery mamadika ilay mahery fo nefa tsy tena namadika mihitsy, tsy mandratra azy mihitsy. Toetra ho an’izay manampahaizana manokana amin’ny fanohanana ny tarehin-tsoratra lahy sy vavy io toetra io, mety ho tiako koa izy raha toa ka tsy nahatonga ahy ho adala loatra ilay mpilalao lahy. Mo Phuong, aza omena tsiny fa Hanh Chi. =))
Eto, eto ny fifantohana. Hanh Chi, fa koa Hanh Van fony izy mbola teo amin’ny fiainan’ny olombelona. Raha ny marina, fony izy mbola Hanh Van, dia sarotra kokoa taminy izany, satria mbola tsy fantatry ny mpamaky hoe iza izy, andriamanitra inona izy, ary ahoana no ahafahany mamboly herim-po mafy loha toy izany. Sady be herim-po izy, manan-tsaina, ary zaza ihany koa, tsy misy afa-tsy ny nakany ny hazo Hong Anh malalany hilalao ao amin’ny Lapan’i Due Vuong dia ampy ho anay mpamaky hamaky ny latabatra sy hihomehezana. Noheveriko fa rehefa lasa Hanh Chi aho dia tsy dia adala loatra, iza no nihevitra fa vao mainka ho mafy kokoa ilay izy, ilay karazana tsy firaharahiana, fa rehefa manao zavatra aho dia manafintohina fa tena mahatonga ny ankizivavy tsy ho adala. Okay . Manomboka amin’ny fihetsika ka hatramin’ny fihetsika, manomboka amin’ny fomba ka hatramin’ny fifampiresahana ao anatin’ny tantara, dia variana amin’ny fihomehezana ny olona indraindray.
“Moa ve aho toa mandainga?”
“Rehefa mandainga ny Tompo Andriamanitra dia tsy mitovy velively amin’ny lainga.”
“Tena tena izy tamin’ity indray mitoraka ity […]”
Ny fomba fitiavana an’i Hanh Chi dia ny mitia fa tsy sahy mitia. Noho ny maha-izy ahy dia mitondra ny andraikitry ny tontolo telo eo an-tsoroko aho. Ny fanehoana rehefa lavitra sy akaiky, fa mamitaka ny zanakavavin’ny tena, tsy mahafehy tena no fanalahidin’ny tantara manontolo, amin’ny fizarana manontolo eo amin’ireo mpilalao fototra roa. Hanh Chi tsy afaka ny tsy tia an’i Shen Ly, Shen Ly tsy afaka ny tsy ho mahery Hanh Chi (Xi poi toko H =]]), ny vatana dia tsy tia tena, ny fitiavana nihoatra noho ny saina, ary voajanahary nampihavana ny fo. dia ilay fahatsapana manaisotra ny fihetseham-pon’ny mpamaky toa ahy. Fa noho ny tsy fahaizany nifehy ny fanaintainana, ny ady, ny enta-mavesatry ny tontolo telo, dia navesatra loatra, ka tsy nisy sahy “namela ny fitiavana”, izay no mifamadika amin’izany, ny fahatsapana fahasorenana. izany, nanomboka tamin’ny nisehoan’i Hanh Chi ka hatramin’ny fiafaran’ny tantara dia voavaha izany. Fa raha ny marina, somary tsotra ny vahaolana nataon’i Miss Chin, nihevitra aho fa tsy maintsy zavatra lehibe izany, fa iza no nanampo fa ho tsotra. Ny sefo farany dia tsy niseho afa-tsy tao amin’ny toko iray na roa, novonoina tamin’ny fomba kisendrasendra.
Ny tena tiako indrindra amin-dRamatoa Chin dia ny fomba hamoronana fifanakalozan-kevitra faran’izay mahafatifaty, tsy misy saina nefa feno fitiavana, vakiteny mamy, ary te ho faty, indrindra eo anelanelan’ny toko 61 – 65. Dia nanapa-kevitra ny handika toko 5 aho. ity, satria raha ny hevitro dia io no ampahany mahafatifaty indrindra amin’ny tantara, tiako.
Raha fintinina, dia manoro hevitra am-pitiavana ity boky ity ho an’ireo izay mamaky matetika tantaram-pitiavana na tantaram-pitiavana, iray amin’ireo tantara tsy fahita firy amin’ny ranomasina fitiavana ankehitriny.
READ [ToMo] Cẩm Nang Những Điều Cần Biết Về Tính Cách ENFP - "Người Truyền Động Lực" | Anybook.vn
Previous: Những phương pháp tạo động lực cho nhân viên hiệu quả nhất | Anybook.vn
Next: Review sách Tự Đào Giếng Trước Khi Chết Khát – ECCthai | Anybook.vn